Akụkọ - Kedu ihe dị iche iche nke ngwa dị iche iche nke Pointer Pattern Aluminom Aluminium？
Kedu ihe dị iche iche nke ngwa dị iche iche nke Pointer Pattern Aluminom Plate
Ọrụ bụ isi nke ogwe osisi aluminom bụ iji gbochie ịpụpụ. Ihe omume ngwa ngwa anyị bụ bọs, ndị na-ebuli elu, ụlọ mbugo, wdg, ebe a na-eji ihe eji eme ihe eji eme ihe iji gbochie ịpụ. N'ebe ndị a, arụmọrụ arụmọrụ nke ogwe aluminom adịghị elu, na 1060 aluminom nwere ike izute ihe achọrọ. Ya mere, olee ihe dị iche na arụmọrụ dị iche iche na itinye nke ihe eji emepụta aluminom? Ihe ndị a bụ obere usoro iji webata gị.
Igwe ihe ndozi na-achọ mgbochi mgbochi, na gburugburu ebe ndị a, arụmọrụ nchara nchara bụ isi ihe ngosi, arụmọrụ 1060 nke aluminom enwebeghị ike ịme friji na-arụ ọrụ mgbochi skid, 3003 aluminum plate dị ka onye ọrụ mgbochi mgbochi aluminom efere, bụ mgbochi oru skid na mmiri. Na mgbakwunye na 3003 aluminom efere, 3A21 aluminom efere a na-ahụkarị, ha niile bụ nke usoro 3 nke aluminom manganese alloy plate.
5052 A na-ejikarị efere aluminom eme ihe na gburugburu mmiri.
Otu n'ime uru nke usoro 5 usoro aluminom bụ na ọ nwere ike imeri nsogbu nke acid na alkali gburugburu, yabụ ụdị ihe eji eme aluminom bụ ihe eji egbochi skid na gburugburu mmiri. N'ezie, na 5 usoro aluminom efere, e nwekwara ụdị ndị dịka 5083, 5754, wdg, nke a pụrụ iji mepụta efere aluminom a haziri ahazi.
Kedu ihe eji ihe eji eme ihe? Enwekwara ngwa ngwa, dị ka ikpo okwu nke ikuku, nnukwu okpomọkụ mgbochi skid, acid dị elu na gburugburu ebe obibi alkali, maka ihe nchekwa, arụ ọrụ efere a na-eme nke ọma dị oke elu, a mụrụ 6061 ihe ngosi aluminom. 6061 efere aluminom akụkụ niile nke arụmọrụ dị ezigbo mma, nwere ike inye nchedo siri ike maka gburugburu ebe obibi dị egwu skid.
Ihe edere n'elu bụ ngwa dị iche iche nke ihe dị iche iche nke ihe eji achọ mma nke aluminom nke Ketchum na-ewebata gị. Na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke aluminium na-agbaze nkà na ụzụ na mgbanwe nke usoro mmepụta, ụdị na ihe nke efere aluminom a na-emewanye ga-abawanye, ọ ga-arụ ọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
aluminum checkered mpempe akwụkwọ price, Ngwa ala Aluminom, 7050 aluminum mpempe akwụkwọ, Anodized Aluminium mpempe akwụkwọ Metal Suppliers, aluminum alloy 6061 ọnụahịa, Mpempe akwụkwọ Aluminom Aluminium,